03.11.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– तिमी नै सच्चा अलौकिक जादुगर हौ , तिमीले मनुष्यलाई देवता बनाउने जादु देखाउनु छ।”
राम्रो पुरुषार्थी विद्यार्थीको निशानी कस्तो हुन्छ?
उसले पास विद् अनर हुने अर्थात् विजय मालामा आउने लक्ष्य राख्छ। उसको बुद्धिमा एक बाबाको नै याद रहन्छ। देह सहित देहका सबै सम्बन्धहरूबाट बुद्धियोग तोडेर एकसँग प्रीत राख्छ। यस्तो पुरुषार्थी नै मालाको दाना बन्छ।
रूहानी बच्चाहरूप्रति रूहानी बाबा बसेर सम्झाउनु हुन्छ। अब तिमी रूहानी बच्चाहरू जादुगर-जादुगरनी बनेका छौ त्यसैले बाबालाई पनि जादुगर भनिन्छ। यस्तो कोही जादुगर छैन जसले मनुष्यलाई देवता बनाइदेओस्। यो जादुगरी हो नि। तिमीले कति कमाई गराउने मार्ग बताउँछौ। विद्यालयमा शिक्षकले पनि कमाई गर्न सिकाउँछन्। पढाइ कमाई हो नि। भक्ति मार्गको कथा, शास्त्र आदि सुन्नु, त्यसलाई पढाइ भनिदैन। त्यसमा कुनै आम्दानी हुँदैन, केवल पैसा खर्च हुन्छ। बाबा पनि सम्झाउनु हुन्छ– भक्ति मार्गमा चित्र बनाउँदै, मन्दिर आदि बनाउँदै, भक्ति गर्दै-गर्दै तिमीले कति पैसा खर्च गर्यौ। शिक्षकले त फेरि पनि कमाई गराउँछन्। जीविका हुन्छ। तिमी बच्चाहरूको पढाइ कति उच्च छ। पढ्नु पनि सबैले छ। तिमी बच्चाहरू मनुष्यबाट देवता बनाउनेवाला हौ। त्यस पढाइबाट त वकिल आदि बन्छन्, त्यो पनि एक जन्मको लागि। कति रात-दिनको फरक छ। त्यसैले तिमी आत्माहरूलाई शुद्ध नशा रहनु पर्छ। यो हो गुप्त नशा। बेहदको बाबाको त कमाल छ। यो कस्तो रूहानी जादु छ। आफूलाई रुह सम्झेर सतोप्रधान बन्नु छ। जस्तै संन्यासीहरूले भन्छन् नि– तिमीले सम्झ म भैंसी हुँ... यस्तो सम्झेर गुफामा बस्यो। उसले भन्यो– म भैंसी हुँ, यति सानो गुफाबाट निस्कूँ कसरी? बाबा भन्नुहुन्छ– तिमी पवित्र आत्मा थियौ, अहिले अपवित्र बन्यौ फेरि बाबालाई याद गर्दै-गर्दै तिमी पवित्र बन्छौ। यस ज्ञानलाई सुनेर नरबाट नारायण अथवा मनुष्यबाट देवता बन्छौ। देवताहरूको पनि राज्य हुन्छ नि। तिमी बच्चाहरूले अब श्रीमत अनुसार विश्वमा दैवी राज्य स्थापना गरिहेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ– अब मैले तिमीलाई जे श्रीमत दिन्छु यो ठीक हो या शास्त्रको मत ठीक हो? जज गर। गीता हो सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। खासगरी यो लेखिएको छ। अब भगवान कसलाई भन्नुपर्छ? अवश्य सबैले भन्छन्– निराकार शिव। हामी आत्माहरू उहाँका सन्तान भाइ-भाइ हौं। उहाँ एक बाबा हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– तिमीहरू सबै प्रियतमा हौ, म प्रियतमलाई याद गर्छौ किनकि मैले नै राजयोग सिकाएको थिएँ, जसबाट तिमी यथार्थमा नरबाट नारायण बन्छौ। उनीहरूले त भनिदिन्छन्– हामीले सत्य नारायणको कथा सुन्छौं। यो कसैले कहाँ बुझ्छन् र– यसबाट हामी नरबाट नारायण बन्छौं। बाबाले तिमी आत्माहरूलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनुहुन्छ, जसबाट आत्माले जान्दछ। शरीर बिना त आत्माले कुरा गर्न सक्दैन। आत्माहरूको रहने स्थानलाई निर्वाणधाम भनिन्छ। तिमी बच्चाहरूले अब शान्तिधाम र सुखधामलाई नै याद गर्नु छ। यस दु:खधामलाई बुद्धिद्वारा भुल्नु छ। आत्मालाई अब समझ मिलेको छ– गलत के हो, सही के हो? कर्म, अकर्म, विकर्मको पनि रहस्य सम्झाएको छु। बाबाले बच्चाहरूलाई नै सम्झाउनु हुन्छ र बच्चाहरूले नै जानेका छन्। अरू मनुष्यले त बाबालाई नै जानेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ– यो पनि ड्रामा बनेको छ। रावण राज्यमा सबैको कर्म विकर्म नै हुन्छ। सत्ययुगमा कर्म अकर्म हुन्छ। कसैले सोध्छन्– त्यहाँ बच्चा आदि हुँदैनन्? भन, त्यसलाई भनिन्छ नै निर्विकारी दुनियाँ। त्यसैले त्यहाँ यो ५ विकार कहाँबाट आउन सक्छ? यो त धेरै सामान्य कुरा हो। यो कुरा बाबा बसेर सम्झाउनु हुन्छ, जसले राम्रोसँग बुझ्छन्, उनीहरू त झट्ट जागृत हुन्छन्। कसैले बुझ्दैनन् पनि, पछि गएर समझमा आउँछ। बत्तीमा कीराहरू आउँछन्, जान्छन् फेरि आउँछन्। बाबा पनि बत्ती हुनुहुन्छ, सबै जलेर समाप्त हुनु छ। यो पनि सम्झाइन्छ– बाँकी कुनै बत्ती त हुँदै होइन। त्यो बत्ती त सामान्य हो। बत्तीमा कीराहरू धेरै जल्छन्। दीपावलीमा कति साना-साना कीराहरू निस्किदै जान्छन् अनि मर्छन्। जिउनु अनि मर्नु। बाबा पनि सम्झाउनु हुन्छ– अन्त्यमा आयो, जन्म लियो, फेरि मर्यो। त्यो त लामखुट्टे जस्तै भयो। बाबा वर्सा दिन आउनु भएको छ त्यसैले पुरुषार्थ गरेर पास विद् अनर हुनुपर्छ। राम्रा विद्यार्थीले धेरै पुरुषार्थ गर्छन्। यो माला पनि पास विद् अनर हुनेहरूको नै हो। जति हुन सक्छ पुरुषार्थ गरिराख। विनाश काले विपरीत बुद्धि भनिन्छ। यसमा पनि तिमीले सम्झाउन सक्छौ। हाम्रो बाबासँग प्रीत बुद्धि छ। एक बाबा सिवाय हामीले अरू कसैलाई याद गर्दैनौं। बाबा भन्नुहुन्छ– देह सहित देहका सबै सम्बन्ध छोडेर म एकलाई याद गर। भक्ति मार्गमा धेरै याद गर्दै आयौ– हे दु:ख हर्ता, सुख कर्ता... त्यसैले अवश्य बाबा सुख दिने वाला हुनुहुन्छ नि। स्वर्गलाई भनिन्छ नै सुखधाम। बाबा सम्झाउनु हुन्छ– म आएको नै हुँ पावन बनाउन। बच्चाहरू जो काम चितामाथि बसेर भस्म भएका छन्, आएर उनीहरूमाथि ज्ञानको वर्षा गर्छु। तिमी बच्चाहरूलाई योग सिकाउँछु। बाबालाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ अनि तिमी परिस्तानको मालिक बन्छौ। तिमी पनि जादुगर ठहरियौ नि। बच्चाहरूलाई नशा रहनु पर्छ– हाम्रो यो सच्चा-सच्चा जादुगरी हो। कोही कोही धेरै राम्रा होसियार जादुगर हुन्छन्। के-के चीजहरू निकाल्छन्। यो जादुगरी फेरि अलौकिक हो अर्थात् एक बाबा सिवाय अरू कसैले सिकाउन सक्दैन। तिमीले जानेका छौ– हामी मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौं। यो शिक्षा हो नै नयाँ दुनियाँको लागि। त्यसलाई सत्ययुग, नयाँ दुनियाँ भनिन्छ। अहिले तिमी संगमयुगमा छौ। यस पुरुषोत्तम संगमयुगको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। तिमी कति उत्तम पुरुष बन्छौ। बाबा आत्माहरूलाई नै सम्झाउनु हुन्छ। क्लासमा पनि तिमी टिचरहरूको काम हो सबैभन्दा पहिला सावधान गर्नु, भाइ बहिनीहरू हो‚ आफूलाई आत्मा सम्झेर बस्नुहोस्। हामी आत्माहरूले यी अंगहरूद्वारा सुन्छौं। ८४ जन्मको रहस्य पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ। कस्ता मानिसले ८४ जन्म लिन्छन्? सबैले त लिँदैनन्। यसमा पनि कसैको ख्याल चल्दैन। जे सुन्यो त्यसैलाई भनिदिन्छन् सत्। हनुमान पवनबाट जन्मे– सत्। फेरि अरूलाई पनि यस्तो-यस्तो कुरा सुनाइरहन्छन् अनि सत्-सत् भनिरहन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई सही र गलतलाई बुझ्ने ज्ञान चक्षु मिलेको छ त्यसैले सही कर्म नै गर्नु छ। तिमीले बुझाउँछौ पनि– हामी बेहद बाबासँग यो वर्सा लिइरहेका छौं। तपाईहरूले पनि पुरुषार्थ गर्नुहोस्। उहाँ बाबा सबै आत्माहरूका पिता हुनुहुन्छ। तिमी आत्माहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ– अब मलाई याद गर। आफूलाई आत्मा सम्झ। आत्मामा नै संस्कार हुन्छ। संस्कार साथमा लैजान्छन्‚ कसैको नाम बचपनमा नै प्रसिद्ध भयो भने बुझिन्छ– यसले अघिल्लो जन्ममा त्यस्तै कुनै कर्म गरेको हुनुपर्छ। कसैले कलेज आदि बनाएको छ भने अर्को जन्ममा राम्रोसँग पढ्छ। कर्मको हिसाब-किताब हुन्छ नि। सत्ययुगमा विकर्मको कुरा नै हुँदैन। कर्म त अवश्य गर्छन्। राज्य गर्छन्, खान्छन् तर उल्टो कर्म गर्दैनन्। त्यसलाई भनिन्छ नै रामराज्य। यो हो रावण राज्य। अहिले तिमीले श्रीमत अनुसार रामराज्य स्थापना गरिरहेका छौ। त्यो हो नयाँ दुनियाँ। पुरानो दुनियाँमा देवताहरूको छायाँ पर्न सक्दैन। लक्ष्मीको जड चित्र उठाएर राख्यौ भने छायाँ पर्छ, तर यहाँ चैतन्यको त पर्न सक्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– सबैले पुनर्जन्म लिनै पर्छ। इनारको पानी घिर्नीद्वारा निकाल्छन् नि, घुमिरहन्छ। यो तिम्रो चक्र पनि घुमिरहन्छ। यसमा नै दृष्टान्त दिएर सम्झाइन्छ। पवित्रता त सबैभन्दा राम्रो हो। कुमारी पवित्र हुन्छन् त्यसैले सबैले उनको गोडामा ढोग्छन्। तिमी हौ प्रजापिता ब्रह्माकुमार-कुमारीहरू। धेरैजसो संख्या कुमारीहरूको छ त्यसैले गायन छ– कुमारीद्वारा बाण मार्न लगाउनु भयो। यो हो ज्ञान बाण। तिमी प्रेमले बसेर सम्झाउँछौ। बाबा सद्गुरु त एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। भगवानुवाच– मनमनाभव। यो पनि मन्त्र हो नि, यसमा नै मेहनत छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। यो हो गुप्त मेहनत। आत्मा नै तमोप्रधान बनेको छ फेरि सतोप्रधान बन्नु छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ– आत्मा, परमात्मा अलग रहे बहुकाल... जो सबैभन्दा पहिला बिछोड भएका थिए, उनीहरूसँग नै पहिला मिल्नुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ– प्यारा सिकीलधे बच्चाहरू। बाबालाई थाहा छ– कहिलेदेखि भक्ति सुरु गरेका हौं। आधा-आधा हुन्छ। आधाकल्प ज्ञान, आधाकल्प भक्ति। दिन र रात २४ घण्टामा पनि १२ घण्टा ए.एम. र १२ घण्टा पी.एम. हुन्छ। कल्प पनि आधा-आधा हुन्छ। ब्रह्माको दिन, ब्रह्माको रात फेरि कलियुगको अवधि यति लामो किन बनाइदिन्छन्? अहिले तिमीले सही-गलत बताउन सक्छौ। शास्त्र सबै हुन् भक्ति मार्गका। फेरि भगवान आएर भक्तिको फल दिनुहुन्छ। भक्तहरूको रक्षक भनिन्छ नि। पछि गएर तिमीले संन्यासी आदिलाई धेरै प्यारसँग बसेर बुझाउँछौ। तिम्रो फाराम त उनले भर्दैनन्। माता-पिताको नाम लेख्दैनन्। कोही कोहीले बताउँछन्। बाबा गएर सोध्दथे– किन संन्यास गर्नुभयो, कारण बताउनुहोस्? विकारको संन्यास गर्छन्, घरको पनि संन्यास गर्छन्। अहिले तिमीले सारा पुरानो दुनियाँको संन्यास गर्छौ। नयाँ दुनियाँको तिमीलाई साक्षात्कार गराएको छु। त्यो हो निर्विकारी दुनियाँ। उहाँ हुनुहुन्छ हेभनली गड फादर, हेभन स्थापना गर्ने, फूलहरूको बगैंचा बनाउने वाला। काँडालाई फूल बनाउनु हुन्छ। नम्बरवन काँडा हो– काम कटारी। कामको लागि कटारी भन्छन्, क्रोधलाई भूत भनिन्छ। देवी-देवताहरू डबल अहिंसक थिए। निर्विकारी देवताहरूको अगाडि विकारी मनुष्य सबैले शिर निहुराउँछन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– हामी यहाँ आएका हौं, पढ्नको लागि। बाँकी ती सत्सङ्ग आदिमा जानु, त्यो त सामान्य कुरा हो। ईश्वरलाई सर्वव्यापी भनिदिन्छन्। पिता कहिल्यै सर्वव्यापी हुन्छन् र? बाबासँग तिमी बच्चाहरूलाई वर्सा मिल्छ। बाबा आएर पुरानो दुनियाँलाई नयाँ दुनियाँ, स्वर्ग बनाउनु हुन्छ। कतिले त नर्कलाई नर्क पनि मान्दैनन्। धनवान व्यक्तिहरूले सम्झन्छन्– स्वर्गमा के नै हुन्छ र। हाम्रो पासमा धन, महल, विमान आदि सबैथोक छ, हाम्रो लागि यही स्वर्ग हो। नर्क उनको लागि हो, जो झुपडीमा रहन्छन्। भारतवर्ष कति गरिब, कंगाल छ फेरि इतिहास दोहोरिनु छ। तिमीलाई नशा रहनु पर्छ– बाबाले हामीलाई फेरि डबल शिरताज बनाउनु हुन्छ। भूत, वर्तमान र भविष्यलाई जानेका छौ। सत्ययुग, त्रेताको कहानी बाबाले बताउनु भएको छ, फेरि बीचमा हामी तल गिर्छौं। वाम मार्ग हो विकारी मार्ग। अब फेरि बाबा आउनु भएको छ। तिमीले आफूलाई स्वदर्शन चक्रधारी सम्झन्छौ। यस्तो होइन, चक्र नै घुमाउँछौ, जसबाट गला काटियोस्। कृष्णको चक्र देखाउँछन्– दैत्यहरूलाई मारे, यस्तो कुरा त हुन सक्दैन। तिमीले बुझेका छौ– हामी ब्राह्मण हौं स्वदर्शन चक्रधारी। हामीलाई सृष्टिको आदि, मध्य, अन्त्यको ज्ञान छ। त्यहाँ देवताहरूलाई त यो ज्ञान रहँदैन। त्यहाँ हुन्छ नै सद्गति, त्यसैले त्यसलाई भनिन्छ दिन। रातमा नै कष्ट हुन्छ। भक्तिमा कति हठयोग आदि गर्छन्– दर्शनको लागि। नवधा भक्ति गर्नेले प्राण त्याग्नको लागि तयार हुन्छन् अनि बल्ल साक्षात्कार हुन्छ। अल्पकालको लागि चाहना पूरा हुन्छ– ड्रामा अनुसार। बाँकी ईश्वरले केही गर्नुहुन्न। आधाकल्प भक्तिको पार्ट चल्छ। अच्छा!
१) यसै रूहानी नशामा रहनु छ– बाबाले हामीलाई डबल शिरताज बनाइरहनु भएको छ। हामी हौं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। भूत, वर्तमान र भविष्यको ज्ञान बुद्धिमा राखेर चल्नु छ।
२) पास विद् अनर हुनको लागि बाबासँग सच्चा-सच्चा प्रीत राख्नु छ। बाबालाई याद गर्ने गुप्त मेहनत गर्नु छ।
सर्व गुणहरूको अनुभवद्वारा बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने अनुभवीमूर्त भव
बाबाको जुन गुणगान गर्छौ, ती सबै गुणहरूको अनुभवी बन। बाबा आनन्दका सागर हुनुहुन्छ भने त्यसै आनन्दको सागरको लहरहरूमा लहराइराख। जति पनि सम्पर्कमा आउँछन्, उनलाई आनन्द, प्रेम, सुख... सबै गुणहरूको अनुभूति गराऊ। यसरी सबै गुणहरूको अनुभवीमूर्त बन्यौ भने तिमीद्वारा बाबाको स्वरूप प्रत्यक्ष हुन्छ किनकि तिमी महान् आत्माहरूले नै परम आत्मालाई आफ्नो अनुभवीमूर्तद्वारा प्रत्यक्ष गर्न सक्छौ।
कारणलाई निवारणमा परिवर्तन गरेर अशुभ कुरालाई पनि शुभ बनाएर ग्रहण गर।